ဤအပိုင်းအစများနှင့်အတူ 2018 ခုနှစ်တွင် Logomania join စတိုင်လ်အမျိုးသားများ
Miguel Serrano | | လူနေမှုပုံစံစတဲ့, ပုံ, သဘောထားတွေ
သငျသညျသေး logomania နှုတ်ဆက်ပြီးကြပြီမဟုတ်လျှင်, 2018 ချိတ်ဆက်ရရန်အလွန်ကြီးစွာသောအချိန်ဖြစ်ပါသည်။ ထို့အပြင်သက်ရောက်မှုများဆုံးရှုံးခြင်းမှအရာခပ်သိမ်းကညွှန်ပြနေသည် လာမည့်နှစ်တွင်အရေးအကြီးဆုံးလမ်းကြောင်းများထဲမှတစ်ခုအဖြစ်ဆက်လက်တည်ရှိနေမည်.
အောက်ပါများအတွက်ငါးစံပြအပိုင်းပိုင်းဖြစ်ကြသည် စတင်တော့မည့်နှစ်တွင်သင်၏ရုပ်ဆင်းသဏ္ဌာန်ကိုစတိုင်ကျလှသော logomania ကိုပေးပါ:
မစ္စတာပေါ်တာ, € 890
Gucci ရဲ့အလိုအရှိဆုံးကတော့ (နာမည်ကြီးအနုပညာရှင်တွေအများကြီးရှိတယ်။ သူတို့ရဲ့ဂုဏ်သိက္ခာကိုခုခံတွန်းလှန်လို့မရဘူး), ဒါပေမယ့်အီတလီကဒီအဝတ်အစားပေါ်တံဆိပ်ကိုတံဆိပ်ခတ်ထားတဲ့ကုမ္ပဏီတွေထဲကတစ်ခုပဲ။ ဒီတော့ သင်ကြိုက်နှစ်သက်သောကုန်အမှတ်တံဆိပ်ကိုရွေးချယ်ပြီးယခုဆောင်းရာသီ၏ကျပန်းအကြည့်များအပေါ်လှပသောလုပ်ဆောင်မှုကိုပြုလုပ်ရန်လိုအပ်သည်.
တကယ့်ကိုကောင်းတဲ့ vibes တွေကိုထုတ်ပေးရုံသာမကလက်မှတ်လိုဂိုတီရှပ်တွေကိုလည်းသူတို့ရဲ့ဘက်စုံသုံးမှုဖြင့်သွင်ပြင်လက္ခဏာရှိသည်။ ဂျာကင်အင်္ကျီ (ဗုံးခွဲသူ၊ စက်ဘီးစီးသူသို့မဟုတ်ဂျင်နင်မ်) လက်အောက်၌သင်တို့၏ကျောရိုးကိုကြည့်ကောင်းအောင်ထိတွေ့နိုင်သည်။ သင်က Blazers နှင့်ညစာအကျီများနှင့်ပေါင်းစပ်လျှင်သူတို့ပေးလိမ့်မည် သင့်ရဲ့စမတ်ကြည့်ဖို့ပေါ့ပေါ့နဲ့ခေတ်ပြိုင်ထိတွေ့.
ဖက်ရှင်၊ ယူရို ၈၉၀ နှင့်လိုက်ဖက်သည်
ဘောင်းဘီရှည်ကိုတိုစေတယ် အာရုံစူးစိုက်မှု၏တ ဦး တည်းအတွက်ခြေဆစ်။ ဤအခြေအနေတွင်ခြေအိတ်သည်သူတို့၏ရွှေခေတ်ကိုရှင်သန်နေသည်မှာအံ့သြစရာမဟုတ်ပါ။ အစိုင်အခဲအရောင်များ၊ ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေခြင်းများ (သို့မဟုတ် (Balenciaga မှဤကဲ့သို့သော) အမှတ်တံဆိပ်ဖြင့်အမှတ်တံဆိပ်ဖြင့် ... အခါသမယတစ်ခုစီအတွက်မည်သည့်စတိုင်သည်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်ကိုသင်ဆုံးဖြတ်သည်။ လိုဂို၏တည်နေရာကိုကြည့်ပါ၊ ၎င်းသည်ဘောင်းဘီနှင့်မဖုံးစေရန်သေချာပါစေ။
အရှေ့ Dane, € 20.47
လိုဂိုအတွင်းခံအဝတ်အစားများကြောင့်အမျိုးသားအများစုသည်ခေတ်ရေစီးကြောင်းမတိုင်မီကတည်းက logomania ကိုလက်ခံခဲ့ကြသည်။ သင့်လက်ဝှေ့သမားများ၊ အကျဉ်းချုပ်များနှင့်လက်ဝှေ့သမားတိုတိုများသည်ကုမ္ပဏီ၏နာမည်သို့မဟုတ်တံဆိပ်ပါ ၀ င်သည်ကိုအမြဲတမ်းသဘောကျနေလျှင်၊ ယခုဤစတိုင်ကိုလောင်းရန်နောက်ထပ်အကြောင်းရင်းရှိသည်.
ဤ Tommy Jeans joggers (နှင့်ယေဘူယျအားဖြင့် maxi logo sweatpants) သည်သင့်ကိုကူညီလိမ့်မည် အလွန် XNUMX နှင့်စတိုင်ကျပန်းကြည့်ရှုပါ လာမည့်နှစ်တွင်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - စတိုင်လ်အမျိုးသားများ » လူနေမှုပုံစံစတဲ့ » 2018 ခုနှစ်တွင် Logomania လက်ခံဖို့ငါးအပိုင်းပိုင်း